CL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured CL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran
Carraan Riyaal Maadriidiifi Barseloonaan wolitti dhufuu baay'ee guddaadha
Garee 32 Shaampiyoonaa kilaboota Awurooppaa irratti hirmaatan keessaa kilaboonni 4 wolakkeessa xumuraaf dhiyaatan beekkaman. Kilaboonni wolakkeessa xumuraaf dabran Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus dha. Kilaboonni 2 Ispeen irraa yoo ta’an, kilabiin Priimer Liigii Ingiliiz tokkoyyuu wolakkeessa xumuraaf dabruu hindandeenne.
Baarseloonaafi Baayer Muniik taphoota guyyaa Kiibxataa ta’een kan marsaa itti aanutti dabruu isaanii mirkaneeffatan. Baarseloonaan morkataa isaa kan ture Paariis San Jerman qabxii woliigalaa 5 – 1n moo’ateeti kan dabre. Baayer Muniik ammoo tapha duraa irratti garee Poortootiin 3 – 1n moo’atamee namoota heddu keessatti sodaa carraa marsaa itti aanutti dabruu ufdhabsiise jedhu uumee ture. Suni shkkii ture. Dhugaan guyyaa Kiibxataa ta’e waan birooti. Baayer kallattii bubbee magaalaa Muniik gara Poortootti akka bubbistu kan taasise. Baayer goolii wolduraa duubaan garee Poortoo irratti roobseen 6 – 1n injifateeti dirree Ali’aanz Ariinaa kan gadi lakkise.
Riyaal Maadriid tapha jalqabaa isa Atleetikoo Maadriid wojjiin geggeesse 0 – 0n kan xumure. Gareen magaalaa Maadriid lamaan bara kana keessa si’a heddu wolqunnamanii Atleetikoon yeroo heddu moo’achuu danda’ee ture. San irrattis, taphattoonni Riyaal kanniin akka Benzemaa, Beel, Modriichiifi Marseelloo tapha 2ffaa irratti hirmaachuu dadhabuun gareen Riyaal tapha 2ffaa moo’atee nidarba wonti jedhu taajjabdootaa heddu keessaa gara haqamuutti deemee ture. Haata’uu malee Riyaal dirree isaa irratti Atleetikoo 1-0n injifatee gara wolakkeessa xumuratti ce’uu danda’eera. Riyaal wolitti aansee woggaa 5f tapha wolakkeessa xumuraa Shaampiyoonaa Awurooppaa irraa qooda kan fudhate.
Taphni kaleessa geggeeffame inni 2ffaa isa Juveentusiifi Monaakoo jiddutti ta’e. Taphni jalqaba Juveenstusiifi Monaakoo jiddutti geggeeffame akkuma isa kan Riyaaliifi Atleetikoo 0 -0n ture kan goolabame. Juventus tapha 2ffaa irratti Monaakoo 1- 0n moo’atee gara marsaa itti aanuutti tankaarfachuu danda’eera.
Gareewwan 4n kunniin eenyu eenyuun akka wolitti dhufu kan beekamu carraa Jimaata dhufu bayuun ta’a.
Previous articleBoordiin Filannoo Itoophiyaa paartilee filannoorratti hirmataniif maallaqa raabse; mormitoonni komii qaban
Next articleItoophiyaan miidiyaa wolabaa ukkaamsuun addunyaarratti sadarkaa 4ffaa irratti argamti, jedha CPJn